Xildhibaan faafiyay tallaabo ay qaadeen Madaxda Dowladda Soomaaliya - Awdinle Online
Xildhibaan faafiyay tallaabo ay qaadeen Madaxda Dowladda Soomaaliya
Muddo Sanad ah ayaa lagu kordhiyey Kaarka Aqoonsiga Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya taas oo shaki badan Abuuray.
Waxay Wararku sheegayaan in Xildhibaanada dib u cusbooneysiinta lagu sameeyey Kaarkooda la sheegay inuu dhici doono 27 December 2021-ka.
Cabdi Shire Ciyaar jecel oo ah Xildhibaan Katirsan Baarlamaanka Golaha Shacabka ayaa sheegay in loo baahan yahay Dawladnimada sida loo rabo keliya loo qaadin,balse looga dambeeyo Waxa laga yeelayo Mas’uuliyiinta Dawlada Dhexe.
Xildhibaan ciyaar Jecel ayaa qiray in Kaarka Aqoonsiga loogu daray Muddo Sanad ah,isagoo shaaciyey in Bil iyo sanad wixii lagu daro Hay’adaha Dawlada muhiim aheyn balse shaqada lasii wadayo inta Baarlamaan kale la helayo.
Murashaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya 2021-ka Ee Mucaaradka ayaa sheegay in aysan aqoonsan doonin wax walbo oo doorasho Boob ah lagu sameenayo ama Muddo kordhin Hay’adaha Dawlada lagu sameenayo.
Previous articleCiidamo ka wada tirsan dowladda oo ku dagaalamay duleedka Muqdisho
Next articleGuddoomiyaha gobolka Banaadir oo saxiixay miisaaniyadda sanadka 2021